Marketing ara-teknika amin'ny Oxymoron | Martech Zone
Marketing ara-teknika miaraka amin'ny Oxymoron
Asabotsy, Septambra 22, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nandritra ny sekoly ambaratonga faharoa (ary ankehitriny), izaho dia ilay kilasin'ny kilasy.
Izaho dia nanana mpampianatra anglisy teatra iray taona iray - Andriamatoa Morgan no anarany. Ny ankabeazan'ny fotoana niarahako tamin'i Andriamatoa Morgan dia lany tany ivelan'ny efitrano fianarana satria tsy azoko ny fankasitrahana an'i Shakespeare. Nahatonga saina an'ingahy Morgan izany.
Indray mandeha, rehefa nanontany Andriamatoa Morgan, tamin'ny lantom-peony Yale-ish, izay karazana teknika literatiora nampiasain'i Shakespeare tao Hamlet, dia natsoaka tanana aho.
Nisento Andriamatoa Morgan, “Eny, Andriamatoa Karr?”
"Oxymorons", hoy ny navaliko.
"Oxymorons?" dron Andriamatoa Morgan: "Fantatrao ve izany atao hoe oxymoron izany, Andriamatoa Karr?"
"Azo antoka!" Hoy aho hoe: "Ny fampifanarahana ny teny mifanohitra amin'ny heviny, Andriamatoa Morgan."
Na dia marina aza aho dia mbola tsy afaka nankasitraka ny fahatsapako va Andriamatoa Morgan ary nasehony ahy ny varavarana. Tena nihomehy tokoa izany avy tao an-dakilasy (taorian'ny fihainoana ny teny marolafy maro avy am-bavako).
Tsy hadinoko mihitsy ny famaritana ny oxymoron… ary gaga aho amin'ny fihoaram-peon'izy ireo ary, angamba, fitomboan'ny fampiasana azy ireo rehefa teknolojia marketing ankehitriny. Raha te-ho toa manana vokatra na serivisy tena mahafinaritra ianao dia atsipazo oxymoron ao anaty fampisehoana marketing na teknolojia anao. Toa tia azy ny olon-drehetra ankehitriny. Raha ny marina, vitsivitsy amin'ireto no ao amin'ny Geekipedia.
Fandrosoana haingana - Mampihomehy ireo mpamorona ireo. Mbola tara ny famotsorana.
Fampivoarana amin'ny fandaharana fampiharana - toy ny hoe ny programa fangatahana mihitsy.
Fahaizana artifisialy - tsy artifisialy fa tena izy.
Angovo azo soloina angovo - ny hany solon'ny angovo dia ny maizina.
URL sariaka - inona no atao hoe URL?
Internet Radio - raha amin'ny Internet dia tsy radio
Solosaina finday $ 100 - angovo? Fidirana amin'ny Internet?
Net Tsy Manao Politika - na iza na iza mandre Akamai or S3?
User Interface - mbola an'ny solosaina ihany io fa tsy izaho.
Search Engine Marketing - tsy marketing (azafady) fa fametrahana.
Fampiraisana tsy misy tohana - raha ampidirina dia midika izany fa misy seam avy any ho any.
Inona ny oxymoron tianao?
American Airlines Email Revue - Tetikady ahazoana
Meteza mamorona teny lakile ho an'ny doka